कुन बैंकका सिइओले एक बर्षमा कति लिए तलब सुविधा ? - Arthapage
कुन बैंकका सिइओले एक बर्षमा कति लिए तलब सुविधा ?
काठमाडौं। निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढि तलब सुविधा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बुझेका छन्। उनले तलब भत्ता र नाफाबाट पाइने बोनससहित गरेर ३ करोड ९० लाख ८२ लाख रूपैयाँ बुझेका हुन्।
सबैभन्दा कम तलब तीन सरकारी वाणिज्य बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छ। निजी क्षेत्रको बैंकमा काम गरेर पनि कम तलब पाउनेमा प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धर हुन्। उनले तलब भत्ता गरेर एक करोड ९ लाख रूपैयाँ बुझेका छन्। यसमा नाफाबाट पाउने बोनस जोडिएको छैन।
क्ष्उचबमष्क्ब्ल्क्ष्ःब् लभधच्ष्ममष्कष्ममष् ऋझभलत
अहिलेसम्म हिमालयन बैंक, एनसीसी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गर्न बाँकी रहेकाले उनीहरूले सिइओलाई दिने गरेको तलब सुविधा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
एभरेष्ट बैंकले प्रमुख कार्यकारीसहित पाँचजना माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब सुविधा एकै ठाउँमा राखेको छ। पाँच जनामध्ये तीनजना २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको पञ्जाब नेशनल बैंकबाट आएका कर्मचारी छन्। दुईजना नेपाली छन्। उनीहरुले कुल ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ग्लोबल आइएमइ बैंकका अघिल्लो प्रमुख कार्यकारी जनक शर्मा पौडेल र कामु प्रमुख कार्यकारी भएर काम गरेका महेश शर्मा ढकालको तलव सुविधा पनि एकै ठाउँमा राखेर धेरै देखिएको छ। उनीहरुलाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिइएको उल्लेख छ। यसमध्ये अधिकांश सुविधा पौडेलले बुझेका हुन्। ढकाल कामु प्रमुख कार्यकारी भएका कारण वार्षिक प्रतिवेदनमा उनको नाम उल्लेख भएको हो।
एकमुस्ट एक्लैले तलब सुविधा बढि बुझ्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे छन्। उनले नाफाबाट बोनसबाहेक ३ करोड ६ लाख रूपैयाँ बुझेका छन्।
बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी शोभनदेव पन्तले पनि एक वर्षमा २ करोड ३२ लाख बुझेका छन्। यसपछि बढि तलब सुविधा बुझ्नेमा प्रभु बैंकका अशोक शेरचन छन्। उनले २ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्।
नबिल बैंकको नेतृत्व गरिरहेका चर्चित बैंकर अनिल शाहको तलब सुविधा भने एक करोड ९८ लाख छ । कुनै बेला नबिलमा शाहअन्तर्गत काम गरेका भुवन दाहाललाई सानिमा बैंकले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको छ।
सिटिजन्स बैंकले गत वर्ष दुईजना प्रमुख कार्यकारीलाई कुल १ करोड ७९ लाख रूपैयाँ सुविधा भुक्तानी गरेको छ। बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले १ करोड ४१ लाख रूपैयाँ तलब सुविधा बुझेका छन्।
लक्ष्मी बैंकले पनि गत वर्ष सुदेश खालिङ र अजय शाहलाई गरेर कुल एक करोड २१ लाख भुक्तानी गरेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकका सुमन शर्माले एक करोड १७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् भने मेगा बैंककी अनुपमा खुञ्जेलीले एक करोड १४ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएकी छन्।
एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी रोशनकुमार न्यौपानेले २ करोड १३ लाख बुझ्दा कुमारी बैंकका सुरेन्द्र भण्डारीले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ सुविधा बुझेका छन्। यसैगरी ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग विलय भएको जनता बैंकले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले एक वर्षमा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको छ।
एनएमबीका सुनिल केसी, सिद्धार्थका शम्भुनाथ गौतम, नेपाल एसबिआइका अनुकुल भटनागरले डेढ करोड हाराहारी पारिश्रमिक बुझेका छन्। सिभिल बैंकका गोविन्द गुरुङले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्।
सरकारी बैंक कृषि विकास बैंकले अनिलकुमार उपाध्यायलाई साढे ३७ लाख दिएको छ भने नेपाल बैंकले ३० लाख भुक्तानी गरेको छ।
कारोबार वृद्धिमा नेतृत्वदायी भुमिकामा रहने कार्यकारी अधिकृतहरूलाई जति धेरै तलब र सुविधा बैंकहरूले दिएका छन्, त्यहीअनुसारको कारोबारको नतिजा पनि सञ्चालक समितिले खोज्छ । सिईओहरूको व्यवस्थापन क्षमताले बैंकले नयाँ योजना ल्याउँदै कारोबार बढाइरहेको हुन्छ । नेपालमा हाल २७ वाणिज्य बैंक छन् ।
प्रकाशित मितिः 9:32:44 AM |
Prevसबैका आँखा ठुला मुद्दामा,साना व्यवसायीका मर्का कस्ले सुन्ने ?
Nextचिसोमा राउटेले पाए नेपालगन्जबाट न्यानो कपडा र खाद्यन